TRUESTORY: မိုးဇေညိမ်း ဘာလဲ ဘယ်လဲ ??
မိုးဇေညိမ်း ဘာလဲ ဘယ်လဲ ??
ဒီရက်ပိုင်းနာမည်ကြီးလျှက်ရှိသော မင်းသားမင်းသမီးများ၏ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးမှုသတင်းများကို သမီးငယ်မှ ပြောပြ၍ သိရှိရသည့် အတွက် ထိုဆောင်းပါးရှင်ဖြစ်သော Moe Zay Nyein ၏ Facebook စာ မျက်နှာသို့ဝင်ကြည့်မိပါသည်။ထိုသူ ၏ Profile ဓာတ်ပုံနှင့် နာမည်တို့အား တွေ့ရသောအခါတွင် ကျွန်တော်တပ်မတော်အတွင်း တာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ်က ခင်မင်ရင်းနှီးဖူးသော မိတ်ဆွေများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်မည်ဟု ခန့်မှန်းမိပါသည်။ ကျွန်တော့်၏ ခန့်မှန်းချက်မှာ 99% သေချာသလောက်ရှိပါသည်။
အဘယ့်ကြောင့် 99% ဟုပြောရသနည်းဟု အမေးရှိသော် ထို Profile ပုံထဲမှ လူကို ကျွန်တော် ရင်းနှီးပါသည်။ ထိုပုံသည် ဆောင်းပါးရှင်၏ ပုံမဟုတ်ပါ။ ဆောင်းပါးရှင်၏ ညီတစ်ဦးပုံ သာ ဖြစ် ပါသည်။ ဆောင်းပါးရှင်နှင့် ကျွန်တော် ရင်းနှီးခဲ့စဉ်က သူ့ညီအား မိတ်ဆက်ပေးသဖြင့် သုံးကြိမ် ခန့် တွေ့ဆုံဖူးခဲ့သဖြင့် ကောင်းကောင်းမှတ်မိနေပါသည်။ ဆောင်းပါးရှင် အသုံးပြုထားသော အမည် သည်လည်း ဆောင်းပါးရှင်၏ သမီးနာမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဆောင်းပါးရှင်၏ အမည်ရင်းနှင့် အပတ်စဉ်တို့ကိုတော့ မဖော်ပြလိုတော့ပါ။ ထိုဆောင်းပါးရှင်နှင့် ရင်းနှီးသူ၊ အပတ်စဉ်တူများတွင် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲပုဂ္ဂိုလ်များ ရှိနေသဖြင့် ဘေးထွက် ဆိုး ကျိုးဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်ပါသည်။ ကျွန်တော်ထိတွေ့သိရှိသလောက်ဆိုရသော် ဆောင်းပါးရှင် သည် ခြေလျင်တပ်ရင်းမှူးသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃၈)၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က စစ်ဦးစီးတက္ကသိုလ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၅၅) တို့ကို တက်ရောက်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
တပ်မတော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းဖြစ်စဉ်များ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး စုံခုံဖွဲ့စစ်ဆေးကာ တိုင်းမှူး၏ ပြင်းထန်စွာသတိပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် အရပ်ဘက် ၀န်ကြီးဌာန တစ်ခုသို့ ပြောင်းရွှေ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ညွှန်ကြားချက်ထွက်လာသည်ဟု ကြားသိရပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော်သည် တပ်မတော်အတွင်း၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း မရှိတော့သော်လည်း မိတ်ဆွေများထံမှ တဆင့် သတင်းများကြားနေရသည်။
ဆောင်းပါးရှင်မည်သည့်ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားသလဲဆိုသည်ကိုကျွန်တော်မပြောလိုတော့ ပါ။ သူရေးသားသည့်စာများတွင် ပေါ်လွင်နေပါသည်။ ဒီ့နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်တော်သည်လည်း သမီးငယ်ရှိရာ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ Boca Raton မြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ခဲ့သဖြင့် မြန်မာပြည်မှ မိတ်ဆွေများနှင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့သည်။ ဆောင်းပါးရှင်နှင့်ပတ်သတ်သည့် နောက်
ဆုံးသတင်းမှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အစိုးရအမှုထမ်းမှ နုတ်ထွက်၍ ပြင်ပစီးပွားရေးလုပ်နေသည်ဟု သိရသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ကျွန်တော်ပြောလိုသည်မှာ ဆောင်းပါးရှင်အနေဖြင့် သူအရေးယူခံရ သည့်ဖြစ် စဉ်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး အထက်အရာရှိကြီးများအား မကျေနပ်ဖြစ်မှုများရှိခဲ့သည်။ ထိုအချက် ကို ကျွန်တော့် အနေနှင့် နားလည်ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဆောင်းပါးရှင်မကျေနပ်သော တပ်မတော် အရာကြီးတစ်စုကြောင့် တပ်မတော်ကို သိက္ခာမချ၊ သစ္စာမဖောက်ပါနှင့်ဟု မိတ်ဆွေတစ်ဦး အနြေ ဖင့် ပြောလိုပါသည်။ ဆောင်းပါးရှင်၏ အကောင့်တွင် Comment ရေး၍ မရသည့်အတွက် Massage မှ တဆင့်လည်း ပေးပို့ထားပါသည်။
From: Win Maung